Carruur la la’ yahay meel ay saan iyo cirib dhigeen - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Carruur la la’ yahay meel ay saan iyo cirib dhigeen
Publicerat måndag 18 mars 2013 kl 12.58
Shantii sano oo ugu dambeysey waxaa Iswiidhen laga waayey carruur qaxooti ah oo tiradoodu kor u dhaaftay 1000 qof. Saddex meelood meel carruurtaas ka mid ahna waxaa la waayey sannadkii la soo dhaafay.
Baaritaan laga soo daayeybarnaamijka Kaliber ee P1 waxaa lagu muujiyey in tirada carruurta qaxootiga ah ee ku dhuumata Iswiidhen gudaheeda ay soo bateen. Hay’adaha dowladduna ma sheegi karaan waxa ay sababtu tahay.
Ingrid Åkerman oo ah hawlwadeen ka shaqeeysa maamulka gobolka Istockholm waxay arrintaas sabab uga dhigeysaa wadashaqaynta hay’adaha dowladda oo yar.
- Arrintu faraha ayey ka baxday mar haddii carruurtii isu dhiibdhiib ku luntay. Macquul ma ahan in marka ilmo la waayo oo boliiska lagu wargeliyo, liiska boliiska uun lagu qoro oo aan wax dabagal ah lagu sameeyn.
Madaxa boliiska xuduudka ee Malmö Kristina Hallander Spångberg waxay sheegeysaa in aysan helin macluumaad ku filan oo ay ku shaqeeyaan.
- Run ahaantii waxba lama qaban karo. Mararka qaarkood ma jiraan astaamo lagu baadigoobo ilmaha oo lagama hayo warqado aqoonsi ama warar ku saabsan dadka ehelka. Wax warbixin ah oo ku saabsan carruurta laguma hayo guryaha la sii dejiyo carruurtaas, sidaas awgeed ma hayno wax aan ku shaqaynno.